musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » CEO Sleepout London: Kuchinja Hupenyu muInovava Cold
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Vakuru vakuru vanoshinga usiku hunotonhora kuti vaunganidze mari yevanoshaya pokugara
by Elisabeth Lang - akasarudzika eTN
Henrik Muehle, General Manager weFlemings Hotel muLondon Mayfair, paCEO Sleepout
rakanyorwa Elisabeth Lang - akasarudzika eTN
Vatungamiriri vebhizinesi vane tsitsi muLondon vakasiya mibhedha yavo kwehusiku humwe chete munaNovember 22 kuti varare kuLord's Cricket Ground, vachiunganidza mari kuvanhu vakatarisana nekushaya pekugara munguva ino yechando.
"Nhasi husiku hwangu," akadaro Henrik Muehle, General Manager weFlemings Hotel muLondon Mayfair. “Ndakarongedza bhegi rangu rokurarisa uye ndichapfeka zvipfeko zvinodziya zvakawanda kuti ndirare kunze kwousiku hunotonhora zvikuru paLord’s Cricket Grounds paSt. Johns Wood Road, London, kuti ndiratidze kubatana nevanhu vanoda rubatsiro.”
Bianca Robinson anobva kuLord Cricket Ground akati: “Kukiya kwakatiomera tese. Asi chimbofungidzira kudai wakanga usina musha, usina mubhedha, usina zvokudya, uye pasina kwawainzwa wakachengeteka.
“Dambudziko iri rave kuita kuti vanhu vakawanda vauye mumigwagwa sezvo vakarasikirwa nemabasa, vasingachakwanisi kubhadhara rendi, uye vachinetsekana nekuriritira mhuri dzavo. Vamwe vakakwanisa kushandisa makamuri ehotera asina chinhu, asi pasina kuramba vachitsigirwa, vanozodzokera mumigwagwa. Vanoda rubatsiro RWENYU. Iwe ucharara pasi nevaridzi vebhizinesi, vatongi, uye nyanzvi dzepamusoro, uye vatungamiriri vemarudzi ese, vese vachishingirira zvinhu zvakarara panze kuti vazivise uye mari, munhu wega wega achivimbisa kusimudza kana kupa mari shoma ye2,000 yekurwisa kushaya pekugara nehurombo. muLondon. Husiku hwako kurara pamwe nevezera rako kwaLord hunogona kuchinja hupenyu.”
The CEO Rara Kunze nevanenge zana vatori vechikamu zvakaitika mushure mekumbomiswa kubva 100. Muna 2020, vakarara vakashinga kutonhora uye vakasimudza inoshamisa £ 2019 yevanopa rubatsiro.
tonHenrik Muehle naHillary Clinton
Henrik Muehle ndomumwe wevakuru vehomwe yemari yeCEO Kurara fundraising. Mukati memavhiki erima gore rapfuura denda rakarova London, uye mahotera nemaresitorendi, mashopu ekofi, nemabhawa aifanira kuvhara kwenguva refu, aibika macurries (300 chikafu) mukicheni yake yenherera yehotera kune vasina pekugara. Kazhinji, ane Michelin Star chef kuORMER Mayfair Restaurant, asi panguva yekuvhara, pakanga pasina vashandi, pasina chef, uye pasina vaenzi pahotera. Aifanira kutamira muhotera aine vanhu vashomanana kuti achengetedze zvinhu zvose.
Yakanga iri nguva inotyisa iyo yasiya vashandi vehotera neresitorendi muLondon yese vasina basa nemari. Vazhinji vavo vakanga vasina kungorasikirwa nemabasa chete asiwo nedzimba dzavo sezvo vakanga vasisakwanisi kubhadhara rendi uye vaifanira kurara zvakaomarara. Vagari veEU havana kukwanisa kudzokera kunyika dzekumba kwavo sezvo pakanga pasina ndege kana sevhisi yechitima kudzokera kukondinendi.
Pakufamba nzendo refu mumigwagwa isina vanhu yeLondon, Henrik Muehle akawana mabhengi ezvokudya usiku uye akafunga kubatsira pakarepo. Vazhinji vevaichimbova vashandi vake vakafara kumutsigira. Kubatana kukuru nekupa chikafu uye zvinwiwa zvinopisa pabhangi rekudya paTrafalgar Square iri pedyo kwaishamisa. Henrik akarongawo mabhegi ezvekudya kubva kuM&S kune avo vanoshaya.
Anofanirwa kuwana menduru, akadaro Frances Smith, wekuLondon. Ini ndinobvuma zvizere uye ngativimbei kuti hapana ari kubatwa nechando mushure mekurara kunze kwemhepo inotonhora kuLord's Cricket Grounds.
Nei zvichikosha kudaro?
The hope dzekushaya pekugara yakatarisana nevanhu 250,000 avo zuva rega rega muUK. Zvidzidzo zvenguva pfupi yapfuura zvinoratidza chokwadi chinokatyamadza pamusoro pekushaya pekugara muEngland.
Yakavambwa muna 2015 naSachigaro Andy Preston, CEO Sleepout zviitiko zvakaitwa mhiri kweUK, kusanganisira 8 Sleepout zviitiko zvinouya gore rino. The Sleepout yakaitirwa paLord's Cricket Ground kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweLondon, uye vakuru vemabhizimisi vakarara kunze kwehumwe husiku hwaitonhora zvikuru gore rino nechinangwa chekutsvaga mari pamwe nekuziva nezvedambudziko rehurombo riri kukwira muUK.
"Mamiriro ekunze husiku ainakidza, uye kunyangwe kwaitonhora, kuziva kuti taibatsira vanhu mudunhu rese kwakaunza kudziya chaiko," mutori wechikamu akadaro.
Chii chatinoziva nezvekurara kwakashata muLondon?
11,018 vanhu vakarekodhwa kunge vakarara zvisina kunaka muguta guru muna 2020/21. Idzi data, kubva kuGreater London Authority's, inoteedzera vanorara zvisina kunaka muLondon vanoonekwa nevashandi vekunze. Uku kuwedzera kwe3% zvichienzaniswa nehuwandu hwevanhu 10,726 vakaonekwa gore rakapfuura uye kanenge kaviri kupfuura makore gumi apfuura. Mukati me10 yakazara, 11,018 vaive vatsva vakarara vasina kumbobvira vaonekwa vakarara muLondon gore rino risati rasvika.
Huwandu hwekurara hwakakasharara hunomiririra panoperera iceberg. Avo vanogara mumashelter nemahostele havabatanidzwe. Kana kuti vanhu vanorara mumabhazi ousiku, vasingaonekwi, kana kuti kufamba kubva pane sofa kuenda kune imwe, inoshuma kudaro Glassdoor.
Elisabeth Lang - akasarudzika eTN
Elisabeth anga achishanda mubhizinesi rekufambisa nyika uye indasitiri yekugamuchira vaeni kwemakumi emakore uye achibatsira kuTN kweanoda kusvika makore makumi maviri. Ane network yepasi rose uye mutori wenhau wekufamba kune dzimwe nyika.